Horse - esinye sezidalwa enhle kakhulu. Amandla abo futhi ngomusa nezisusa zokuba ezinganekwaneni enhle, amabhayisikobho umndeni, nokuningi. Noma yimuphi abalimi ihhashi ukwazi ukuthi isilwane kumele kube igama wokugaklazeka sibonakalisa ubuntu bakhe. Lokhu kubalulekile ikakhulukazi racehorse. Umbuzo lokho ushayele ihhashi libuhlungu yimuphi umnikazi ihhashi, ngoba kufanele sikhumbule futhi kungaba, nokuqopha igama emakhasini umlando. Ngokwesibonelo, odumile oyisibonelo Swedish Margaretta Lei nomyeni wakhe Wolfgang ngandlela-thile agqoke izinhlanga ehhashini okuthiwa Escada. Weza sekugcineni kuqala. Kamuva leli gama baba igama elikhulu imfashini umbuso, ihlelwe uMargaretha nomyeni wakhe.
Ekhulwini XVIII, isiteketiso yeyehashe okwakubaluleke ozikhethela. mare thoroughbred babukhanya negama iDemo. Ngokuvamile, it kwakuhambisana nezinga nezihlobo zakhe - zamahhashi kanye mares baye athola udumo zamahhashi ezinhle. Omunye nenqubo ukuze ushayele ihhashi, kwaba ukwengeza izinhlamvu zokuqala amagama abazali bakhe. Ngakho, uma inkunzi ngokuthi Libhala futhi mare - Adele, inzalo yabo abizwa ngokuthi Akbar noma Amber. Aesthetics isibe isici uhola ngokwemibandela kukhethwa izidlaliso. Ngakho, lesi silwane uykhinjiswa umbala walo, umbala izici, kwalokho.
Uma Ihhashi bay, kungashiwo ngokuthi Burke, black horse abakubiza Raven ne-ginger isilwane - Spark. Esinye isici - the "impi". Kusukela ezikhathini zasendulo, ihhashi uzame ukuze kuyacaca ukuthi bungenzani. igama oqhoshayo angakufunda kuphela isandla kulesi. Ngokwesibonelo, ongakhetha noma Fighter Namandla wabonisa amandla into engavamile ukukhweza, okubangela ukwesaba nabaphikisi. ERussia, izidlaliso lokho akusho ukuthi kuye kwadingeka ukuba amabizo. Ngakho, okukhethwa Kwasakazwa abanesibindi, enamandla, elikhanyayo.
Indlela ukukhetha igama mare
Elethiwa amahhashi akulona usuku, futhi iminyaka eminingi, ngakho-ke kumelwe kukhunjulwe futhi sijabulise hhayi kuphela abanikazi, kodwa kubo bonke abanye. Indlela igama ihhashi (intombazane), ukuze singathwesi uzisole igama ekhethiwe? Igama Ungakhetha ukuthi funny futhi amnandi futhi sina, uyaziqhenya. Ngokwesibonelo, ukulandisa mnene futhi Girly kakhulu Asterisk bayojabulela Omuny abasha futhi njengabesifazane. Isidlaliso elihlobene ne ubunjalo ihhashi ngokwayo, kungaba Ukugunda kakhulu. mare elinganeliseki igama efanelekayo Gourmand, Frisky futhi esebenzayo - Bestia, futhi ngomusa futhi azibamba - Anfisa. Ngo umbala wehhashi elimhlophe kuyodingeka uvumelane igama Snowball, ngoba emnyama - Nochka, futhi bay - Storm. amagama ngomusa ithathwe amanoveli zakudala, kanye lathathwa emlandweni: Justine, Jane, Elizabeth, Margot, uMegan, Adelaide, noJuliet, Charlotte, Desdemona.
isidlaliso Kuhle yeyehashe
Indlela igama ihhashi-umfana - umbuzo obudisi. Ukukhetha izidlaliso ahlale nenqubo efanayo, ngaphandle ukuthi kufanele kube kunalokho asabekayo nesibindi. Eliyisihlubuki abanesibindi inkunzi igama ephelele noma i-Thunder Storm. Ngokuvamile isiko sibala ihhashi njengoba yamahlaya book uhlamvu - le Joker, Cyclops, Phoenix, Beast. Heroes yochungechunge odumile izincwadi futhi yaqashelwa kule msebenzi. Musketeers amagama ukunikeza i base kakhulu ebantfu ihhashi: Athos ngokugqamile, Aramis, uthandeka kanjani, Porthos esikhulu sibe abangane indoda kweqiniso. abalobi ezidumile futhi abaculi, futhi, kufanele kungaqashelwa lapho kuphakama umbuzo kanjani ukuqamba ihhashi. Ngamabomu futhi Amadeus engavamile, beshesha futhi okusheshayo Chopin, u-Arthur Ricci lungafinyeleleki noma bejabule - isinqumo ngesakho.
Amahhashi kusukela izwe movie
Ungakhohlwa ngezilwane ubani obekade edlala kuleya movie. Ngokwesibonelo, kungenzeka ukuthi uqambe ihhashi emva ifilimu adumile "Intandokazi", lapho, sibonga ukuphikelela okuqinile ukuqeqeshwa kwakhe ihhashi Homely usezuze isihloko best izikhathi Okukhulu Kwezomnotho, lapho abaningi bafuna umcebo wakhe ku emjahweni. Esinye isibonelo esihle ukuze ukhethe igama isilwane movie "War Horse", lapho Joey ihhashi inikezwe impi ngesikhathi umkhosi wakhe abasha uya beyofuna umngane weqiniso. isibonelo esinjalo zobungane ukuthula ngokuqinisekileko kuzokunikela imizwa emnandi futhi umnikazi ihhashi, nabanye.
Circus izilwane nazo azinake. Ngokwesibonelo, isidlaliso enhle yeyehashe kungenziwa kukhethwe okusekelwe amagama eliqhakazile tsirkachek odumile njengoba Imelda noma Lucia.
Ungakwazi ukuxazulula inkinga kanjani ukuqamba ihhashi ngokusebenzisa imigomo zomculo. Ngokwesibonelo, lokho kuzwakala kamnandi isidlaliso enothini noma inothi. Mare okuthiwa Melody singaqiniseka ukuthi siyoba abalimi umklomelo wokuqala. Ihhashi okuthiwa Arpeggio uzonikhumbuza kumnikazi umculo, kanye Italy enhle. Bekar inketho ilungele ihhashi ngohlamvu eqinile.
Ngakho, ungakwazi ukukhetha ephelele igama ihhashi ukuthi ngeke nje kuhlangene umbala waso uhlamvu, kodwa futhi nomthelela ukunqoba yonke imincintiswano. Umoya isibindi lokulwa kungenziwa kalula obonakaliswe isidlaliso elula futhi kube lula. Kuwufanele umzamo kancane ucabange ngakho, futhi uyozizwa wena iyiphi inketho esifanele ihhashi lakho.
Kanjani ukuze ome
Yini abazali kufanele sinake lapho ingane iwe ubisi amazinyo
Ingxube ne prebiotics "Frisovom 1": ukubuyekezwa odokotela kanye nokusetshenziswa